Abaninzi kuni ngabo abachaphazelekayo njani ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela. Lento ingakumbi nzima kuba ngabo kakhulu young ukuthatha i-omdala iindlela zonxibelelwano kwaye dating. Oko kukuthi, ingxaki kakhulu ngokufanayo xa boy — iminyaka thinks: ndifuna ukufumana acquainted nge kubekho inkqubela, kodwa akunyanzelekanga ukuba ukwazi ukwenza kuba oku. Ukuze ukusombulula iingxaki ezininzi ukuze phakama sele e enjalo amatsha na ethe-ethe ubudala, ndinguye ukufunda eli nqaku. Ngexesha lokuqala glance, lento nzima kakhulu. Emva zonke, xa ufuna, okanye nkqu ubudala, unoxanduva? phantsi kwempahla yakho wayemthanda nezinamandla, kwaye yakho yenza isangqa ka-unxibelelwano kakhulu limited. Kodwa enyanisweni, oko kwenza ukuba kube lula ukufumana ukwazi a kubekho inkqubela — eminyaka. Uninzi kusenokwenzeka ukuba, ixesha lakho elininzi, ufuna ukuchitha ngayo esikolweni. Ewe, ukuba akunjalo, ngenxa studying kuba ngoku yeyona nto ibaluleke kakhulu. Kodwa ohamba kunye ne-studying esikolweni kubalulekile easiest ukuqala i-acquaintance nge kubekho inkqubela. Apho ufuna enye kuba zombini relaxed atmosphere. Uyakwazi buza classmate malunga elandelayo isifundo, oko waye wacela kwi-ndlu, njalo-njalo. Ke thatha qala ukuba ummangaliso indlela yakhe igama ligama, nokuba yena likes esikolweni, ngubani yena ingaba yayo free ixesha, njalo-njalo. Ilizwi kuba ilizwi, apha kwaye kuhlangatyezwana nazo. Kuqhubeka zithungelana kwaye uza kuba abahlobo. Kwaye ukuba ufuna ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela, kunye othe wena musa nzulu ngendlela efanayo iklasi. Ungalufumana njani acquainted kunye kubekho inkqubela.
Ukuba kunzima scary ukuya ekunene uthi Molo, ngubani igama lakho, zama ukufumana wakhe ukuba sympathize kuqala. Faced kwi-corridor ngexesha utshintsho, ncuma ngomhla wakhe, ukuba yena ziphantsi okanye into ziphantsi, uncedo yakhe ukuya kuma phezulu okanye khetha phezulu fallen nto, njalo-njalo. Uza kwenza yakhe emotions, yena uya khumbula kuwe, kwaye ngoko uyakwazi nje kuza uthi: Rhoqo mna bona nawe ngomhla utshintsho, u k ubonakala ngathi umdla kum, masithi nathi get acquainted, ngubani igama lakho. Ukuba kubekho inkqubela yindlela eqhelekileyo kwaye kanjalo yabonisa imiqondiso ingqalelo ngakuni (smiling, esithi enkosi uncedo, njalo-njalo.), ke yena uya react yakho umbuzo kakuhle, uza kufumana i-acquainted. Kuqala uyakwazi ukuthetha ngayo ukuya esikolweni subjects: ngubani likes ntoni kuzo esikolweni, yintoni izifundo ziqhutywa ncwadi, xoxa ootitshala. Kwaye ngoko uyakwazi smoothly tshintshela ezinye izihloko: imisetyenzana yokuzonwabisa, leisure imisebenzi, oyithandayo umculo, njalo-njalo. Ukuba uyafuna, ungakwazi nkqu zama mema yakhe ukuthatha i-hamba. Kwaye kwakhona: ukuba ufuna ukufumana acquainted nge kubekho inkqubela ixesha elide, kwaye yena ngokuqinisekileyo ibonisa sympathy kuwe, kodwa yena akakwazi fit, ngenkalipho indlela yokuqala kwaye get acquainted. Kukho ezininzi timid girls kwi-school abo onomdla kuso boys, kodwa abazange ayoyika ukufumana acquainted kuqala, ngoko ke kungcono kuba boys ukuthatha eli phulo. Le njongo, i-extracurricular isangqa ka umdla okanye emidlalo icandelo ugqibelele — apha uvumelekile ukuba eyakho mfundisi kwaye kuxhomekeke ngubani ofuna ukuya kuhlangana, apho ufuna ukujonga. Ukutsala i-ingqalelo yabo iintanga, into zingafani evela kwabanye. Kwaye ukususela nisolko ukucinga njani ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela, lixesha ukumisa chasing ibhola kunye guys. Ungene kwi-a, kwaye oku ndiya kukunika ezininzi okuninzi. Uza yandisa yakho horizons kwaye kuba kokukhona kwaphuhliswa. Okwesibini dibanisa — kuba eyodwa, oko kuthetha ukuba, ngakumbi umdla kuba girls. Ewe, kwaye fumana ngokufanayo umxholo kuba incoko apha elula: uyakwazi luqale ngxoxo into usombulula kwi-yenza isangqa, kwaye ke get acquainted. Mhlawumbi a abantu abaqhelekileyo ibinzana.
Ukuba akunjalo, ngoko ke lixesha ukungena
Dating ngokusebenzisa intlalo networks ngu iluncedo kakhulu kwaye kulula. Kwinkqubo yethu kwaphuhliswa society girls ngokunjalo ungasebenzisa Komatke okanye Facebook, ngoko ke ukuyisebenzisa ngobulumko. Ngethamsanqa, abenzi be zokusebenza weza phezulu kunye kakhulu iindlela ezininzi nakekela kwaye zoba i kubekho inkqubela s ingqalelo kuwe. Ungalufumana njani acquainted nge kubekho inkqubela kwi loluntu womnatha.
Yonke into simpler kwaye lula apha
Nje ukubhala yakhe umyalezo: Molweni, ndiza liked kuwe.
Ndifuna ukuya kuhlangana nani
Emva koko jonga indlela kubekho inkqubela reacts. Ukuba ufuna musa impendulo okanye impendulo kakubi, musa kuba upset, akukho namnye unako rhoqo kwaye soloko efana ngayo, kuyinto kunjalo. Nje kuqhubeka dating nzame, kodwa sele kunye nezinye girls. Kwi-a incoko kwi loluntu womnatha kubalulekile hayi nabukrwada, hayi insist kwi yokufumana acquainted ukuba umntu akakwazi ufuna ukufumana acquainted. Zithungelana ngcono, ecela ngamnye eminye imibuzo kwaye aphendule. Buza kubekho inkqubela umdla imibuzo, umbonal nezinamandla, abo apho unako impendulo hayi kuphela ewe okanye hayi, kodwa ngakumbi oluneenkcukacha. Ngoko ke, ekugqibeleni, musa phoselani emva enjalo ixesha-tested indlela ungalufumana njani ukwazi kubekho inkqubela ngokusebenzisa abahlobo bakho. Emva zonke, ngokufanayo acquaintances ziindleko ezinkulu indlela yokufumana ezenzeka ulwimi, ngokufanayo umdla okanye ubuncinane hayi kuba benyanzelekile yi-absolute ignorance omnye komnye. Ngoku uyazi njani ukufumana ukwazi kubekho inkqubela ngaphandle naziphi na iingxaki. Musa kuba ukuba neentloni, name, improvise, kodwa kusoloko bahlala ngokwakho. Emva zonke, ukuba ungathanda i kubekho inkqubela kwindawo enye wakhe iindima, ngoko ke awukwazi kuqhubeka ukudlala ngonaphakade. Ngaphandle, lento deception ngokwakhe kwaye yakhe. Kwaye ulahlekise, njengokuba sisazi, akulunganga
← Icacile dating Belgium dating Site free Belgium